Tags Rfid, Kaarka Rfid, Xarkaha Xargaha ee Rfid - Toptag
Qoyan / Qalalan RFID Inlay
Sumadaha RFID Anti-been-abuurka ah
RFID Dharka Tag
RFID Tagel Jewelry
RFID Maktabada Tag
RFID Muraayadda Tag
RFID Gaarka Gaarka ah
Anti RFID Birta Tag
RFID Tag Ceramic
RFID Gas Silsiladda Tag
RFID Ciddiyaha Tag
RFID Khatimidii Tag
RFID Taayirada Tag
RFID Qashinka Bin Tag
Xirmada xargaha ee RFID
Xarigga la tuuro
Xarkaha gacanta lagu xidho
Xarkaha Gacanta ee PVC
Silsiladda siligga siligga
Maareynta Xayawaanka ee RFID
Xayawaanka / Xayawaanka Microchip
Microchip Scanner / Akhriste
RFID Dhegta Tag
Giraanta Cagta Qoolleyda
Kusoo dhawow Toptag
Sida soo saaraha wax soo saarka RFID khibrad leh, waxaan bixinnaa alaabada ugu fiican.
ADEEGA HANUUNINTA SARE
Kooxda iibinta Toptag ayaa ku siin kara talo soo jeedin xirfadeed baahidaada la habeeyay. Waxaan kuu soo bandhigeynaa shaybaarro bilaash ah baaritaankaaga.
Toptag waxay si joogto ah u hagaajineysaa habka wax soo saarka, waxay yareyneysaa kharashyada wax soo saarka, waxayna hagaajineysaa wax soo saarka wax soo saarka, si ay u siiso macaamiisha tayo wanaagsan oo alaab jaban
in ka badan 20 sano oo khibrad wax soo saar ah, 2000 oo shaqaale ah, 10 kooxood oo R&D ah iyo 20 khadad wax soo saar oo heer sare ah oo loogu talagalay kaararka iyo sumadaha. Toptag waxay u huraysaa R&D, soo saarida iyo iibinta alaabada RFID iyo xalka RFID.
Waxaan bixinaa noocyo kala duwan oo tagf rfid ah oo loogu talagalay dalab kala duwan. Waxaan horumarinta waxyaabaha cusub RFID sida ay baahida macaamiisha ...
Topag's transponders waxay gacan ka geysaneysaa hubinta raadraaca bilaa cillad la'aanta ah iyo yareynta qasaaraha, iyadoo la xoojinayo maareynta keydka iyo xawaaraha farsameynta. Tags Xiriir la'aanta xiriirka RFID waxay hagaajineysaa xawaaraha ururinta xogta iyo saxsanaanta, taasoo ka dhigeysa raad raaca kharash badan iyadoo la kordhinayo saxsanaanta.
Waxay u isticmaashaa teknolojiyada RFID si ay si wax ku ool ah ugu maamusho dharka ama dharka gaarka loo leeyahay, dharka ama dermaha, hagaajinta agabka iyo yareynta khaladka aadanaha ee howlaha dhaqida iyo biilasha. Toptag waxay xiriir dheer la leeyihiin Hilton, Marriot.
RFID maaraynta dharka
Tikniyoolajiyadda dhacdooyinka bilaa-waayirka ah ayaa heer ka noqday xafladaha muusikada ee ugu sarreeya dalka, iyadoo taageerayaashu ay si sharaf leh u xirtaan xirmooyinka xariggooda ah ee RFID sannadka oo dhan sida calaamadaha sharafta. Toptag waxay iskaashi la lahayd xaflado badan sida Rio festival, SnowGlobe Music Festival iwm.
Tigidhada Dhacdada & Madadaalada
Toptag waxay leedahay isdhexgalka tikniyoolajiyadda casriga ah si loo maareeyo waxkasta oo khibrad daryeel caafimaad ah oo ku dhexyaal deegaanka u gaarka ah xarunta daryeelka caafimaadka - maareynta martida, la socoshada hantida iyo la socoshada xaaladaha, adeegyada goobta waqtiga dhabta ah, biilasha iyo nabada maskaxda.
Daryeelka Caafimaadka RFID
Tobanaan sano oo waayo-aragnimo ah ee horumarinta xalalka xakamaynta marin u helka ee marin u helka jirka iyo caqligalka ah, Toptag waxaa ku kalsoon ururada iyo dowladaha inay bixiyaan xalal amni iyo ilaalin aan la dhaafin karin.
Tilmaamaha RFID waxay u oggolaanayaan nidaamyada in lagu aqoonsado gawaarida si elektaroonig ah loogu aqoonsado mitir fog. Gawaarida si otomaatig ah ayaa loo hubin karaa, oo ay weheliyaan xamuul la aqoonsaday. Dib ayaa loo eegi karaa iyaga mar kale si fudud. Caawimaad khabiir ah, RFID waxay bixin kartaa hab lagu kalsoonaan karo oo lagu aqoonsan karo gawaari aad u tiro badan, laguna meelayn karo goob gaar ah ama aag gaar ah oo ka mid ah goobta, sidoo kale inta badan loo isticmaalo ETC ama Parking management.
Ku dhajinta xoolaha leh RFID waxay noqon kartaa aalad muhiim u ah hubka beeraleyda si loo aqoonsado xayawaan kasta oo ay la socdaan asalkiisa iyo macluumaadka caafimaad. Dhakhaatiirta xoolaha ayaa hada riixaya in dhamaan xayawaanaadka guryaha lala socdo iyadoo la adeegsanayo RFID si loo abuuro nidaam lagu aqoonsado xayawaannada lumay ee la helay.
Qalabka wax lagu beddelo ee loo yaqaan 'RFID-on-metal transponders' wuxuu ku jiri karaa noocyo kala duwan oo raad raaca hantida iyo codsiyada warshadaha ka ballaaran. Codsiyada ugu muhiimsan waa raadinta hantida ee server-yada iyo laptop-yada xarumaha xogta IT, xakamaynta tayada wax soo saarka warshadaha iyo soo saarista, dayactirka dhuumaha saliida iyo gaaska, iyo dhululubbada gaaska, la socoshada qalabka, hub raadinta, iyo xakamaynta tayada qalabka caafimaadka.
RFID on Birta
Maanta, ha ahaato EC iyo kaararka deynta, kaararka aqoonsiga shakhsiga ah, baasaboorrada ama kaararka caymiska caafimaadka, xogta waxaa lagu kaydiyaa farabadan RFID, iyadoo la adeegsanayo barnaamij ku habboon, xogta shakhsiga ah waxaa sidoo kale si qarsoodi ah u aqrin kara taleefannada casriga ah. Toptag's Kaararka xannibaadda RFID waxay bixiyaan difaac la isku halleyn karo oo ka dhan ah akhrinta aan la oggoleyn ee xogta inta jeer ee 13.56 MHz.
Shirkaddayadu waxaa lagu aasaasay 2008 iyada oo leh laba xafiis oo waaweyn oo ku yaal Hong Kong iyo Shenzhen, Shiinaha. Shirkadeena waxaa aasaasay koox dad jecel oo hal abuur leh oo leh khibrad RFID ganacsi iyo khibrad soo saar. Shirkadeena waxay ku takhasustay astaamaha kala duwan ee loo yaqaan 'RFID tags' iyo sumadaha leh qaabab iyo qalab kala duwan. Calaamadeena waxay u dhexeeyaan soo noqnoqosho hooseeya illaa heer aad u sarreeya, oo si ballaaran loogu adeegsado NFC, lacag bixinta moobiilka, xakameynta marin u helka, maareynta silsiladda, maareynta agabka, keydinta & maaraynta saadka, maaraynta xoolaha iyo wixii la mid ah.
Qolka 1401, Xarunta Caalamiga ah ee ZhuJiang, LongXiang Avenue, Degmada LongGang, Shenzhen, Shiinaha 518172.
Kacaanka baakadka caqliga leh ee alaabada ilaalinta caafimaadka iyo caafimaadka
Recresco waxay adeegsataa nidaamka digniinta dhawaanta ee RFID ee warshadda si loo yareeyo halista isku dhaca dadka iyo gawaarida